I-infographic: Imbali emfutshane yeNtengiso yeendaba zeNtlalo | Martech Zone
Ngelixa uninzi losasazo lwentlalo lucoca onke amandla kunye nokufikelela kwezinto eziphilayo urhwebo eendaba zentlalo, iseyinethiwekhi ekunzima ukuyifumana ngaphandle kokonyusa. Intengiso yemidiya yoluntu yintengiso ebengekho kwiminyaka nje elishumi eyadlulayo kodwa yavelisa i-11 yezigidigidi zeerandi kwingeniso ngo-2017.
Iintengiso zentlalo zibonelela ngethuba lokwakha ulwazi, ekujoliseni ngokusekwe kubume bendawo, inani labantu kunye nedatha yokuziphatha. Kananjalo uninzi lweentengiso zinokubekwa kwimeko-bume kufutshane nezihloko ezifanelekileyo. Uninzi lwamaqonga lukwabonelela ngamathuba okumaketha kwakhona kwiindwendwe ezishiye indawo yakho okanye inqwelo yokuthenga zaza zabuyela eluntwini.
Bendihlala ndinguye Umtsalane wentengiso yemidiya yoluntu, nangona. Ukuthandabuza kwam kwintengiso yemidiya yoluntu sisizathu somsebenzisi wemidiya yoluntu. Ukuba bakumaqela ekujoliswe kuwo apho umdla unxibelelene nentengiso, unokuvelisa iziphumo ezintle. Nangona kunjalo, ukuba injongo yomsebenzisi kukundwendwela usapho kunye nabahlobo kwaye ugcina udlala iintengiso ezingabalulekanga phakathi… awunakufumana iziphumo ozifunayo ukuxhasa umkhankaso oqhubekayo.
Enye into ephambili yentengiso yemidiya yoluntu kukuqinisekisa ukuba amakhonkco akho afakwe ngokufanelekileyo kwidatha yomkhankaso. Kuba uninzi lwabasebenzisi beendaba zosasazo zisebenzisa ii -apps, uninzi lwezi ndwendwe lunokubonisa njengotyelelo ngqo kwi kubahlalutyi iqonga ukusukela izicelo azishiyi imithombo ekubhekiswa kuyo njengoko ikhonkco licofiwe kwaye isikhangeli sivula ngokuzenzekelayo.
Umdibaniso uyile le infographic ukubonisa ukuqhubela phambili amaqonga entengiso. Umanyano sisisombululo sokuphela kokuphela kokuqonda okuqhutywa yidatha, ukwenziwa kokutya okwenyani kwexesha lokwenyani, kunye nentengiso yenkqubo kuzo zonke iinethiwekhi ezinkulu zentlalo kwiqonga elinye.
tags: umthengisiFacebookIngeniso yentengiso ye-facebookfacebook iintengiso apifacebook iintengiso eziphathwayofacebook axhaswe ngamabaliezineLinkedInIngeniso yentengiso edibeneyointengiso ye-Linkedin apiIngeniso yentengiso yentlalointengiso yoluntuInkcitho kwintengiso yoluntuImidiya yokuncokolayentengiso yeendabaukugqubeka kwiTumblrTwitterIngeniso yentengiso ye-twitterIintengiso ze-twitter apiIintengiso ze-twitter amaqabane apiIngeniso yentengiso yeselfowuniyahooyoutube
Ngomhla wama-23 ku-Disemba 2016 ngo-7: 01 AM
Molo enkosi nge-infographic enomdla. Mna ngokobuqu ndaqala kwi-intanethi ngendlela ye-1998 ngaphambi kokuba i-Social media icingelwe kwaye ngoku jonga ukukhula! ibiyihambo ephambeneyo 🙂 enkosi
Aug 13, 2021 ngo-1:00 PM
I-infographic entle kwaye ukusukela ngo-2021 amanani abeka inani labantu abasebenzisa imidiya yoluntu kwi-3.95 yeebhiliyoni ezimangalisayo. Kubonakala ngathi imidiya yoluntu ilapha ukuze ihlalele ikamva elibonakalayo.